Fanafihana mitam-piadiana : Nitolo-batana ilay polisy -
AccueilSongandinaFanafihana mitam-piadiana : Nitolo-batana ilay polisy
Fanafihana mitam-piadiana : Nitolo-batana ilay polisy
20/09/2018 admintriatra Songandina 0
Tamin’ny alalan’ny fiara tafajanona teny Antsahavola, nandritry ny fanafihana mitam-piadiana nandraisany anjara tamin’ny fandrobana nahavery volamena milanja 5, 360 , no nahalalana fa isan’ny niray tendro tamin’ny asan-jiolahy ity manam-boninahitra iray eo anivon’ny polisim-pirenena.
Nitolo-batana teny anivon’ny polisim-pirenena ilay manam-boninahitra polisy mitarika ny vondron-kery eny Tsaralalàna, ary nitondra ireo porofo nanenjehana azy, afakomaly.. Tao amina trano fonenana teratany Sri-Lankais no nisehoan’ny fanafihana, ka voatondro ho mpikambana tamin’izany ity mpitandro filaminana ity. Maherin’ny 620 Tapitrisa Ariary no teti-bidin’io volamena lasany io”, araka ny fampitam-baovao voaray avy eo anivon’ny polisim-pirenena. Araka ny fanazavana eo anivon’ny polisy misahana ny ady heloka bevava etsy Anosy, dia nisy fampandrenesana fahitana fiara nampiahiahy teny amin’ny manodidina.
Nidina teny an-toerana avy hatrany ny mpitandro filaminana nanao ny fanadihadiana. Fantatra tamin’izany fa olona nitonona ho polisy no nitondra io fiara io, nandritry ny fisavana nataon’ny polisy nandrindra ny fifamoivoizana teny an-toerana. Rehefa nojerena anefa ny tao anatiny dia fandrika ihany. Tsy azy ny fiara ka nanaovana fanadihadiana indray ny olona voalaza fa tena tompony. Ity farany no nilaza fa ilay manam-boninahitra no nindrana izany taminy, hoy ny fanazavan’ny polisy. Etsy andanin’izay, nampiahiahy fatratra ihany koa ny tsy nahatongavan’ity farany niasa taorian’ny fanafihana. Ny ampitson’ny nahaverezan’ilay volamena ihany dia nanomboka ny savahao. Io polisy io dia nolazain’ireo mpiara-miasa aminy fa tsy hita popoka, vantany vao tanteraka ilay asa ratsy, ka vao mainka nanamarina ny ahiahin’ireo mpanao fanadihadiana izany. Rehefa feno kosa ny porofo nanenjehina azy vao namoahana ny fampikarohana.
Ankoatra ity mpitandro filaminana mitarika vondron-kery manokana miady amin’ny asan-jiolahy eny Tsaralalàna voarohirohy tamina halatra volamena maherin’ny 5 kilao ity. Fantatra tamin’ny famotorana koa fa ilay mpamily ny fiaran’ity Sri-Lankais ity ihany koa no tompon’antoka voalohany tamin’izao fanafihana nitam-piadiana izao. Niaky tanteraka ny heloka nataony ity farany, ary nanondro ireo namany roalahy. Indro fa nitolo-batana niaraka tamin’ny entana nangalarina ilay manamboninahitra. Rehefa nasehon’ny ilay Sri-Lankais io entana io dia azy tokoa, ary tsy misy nandrombinana. Mitohy ny fikarohana ny naman’izy ireo iray tompon’antoka, ary hatolotra ny fampanoavana ny raharaha.
Hohatsaraina ny fifandraisan’i Madagasikara sy Vietnama. Tamin’ny alalan’ny fanaovan-tsonia fifanaraham-piaraha-miasa, teo amin’ny firenena roa tonta, natao omaly teny Iavoloha no nanamarihana izany. Voasonia tamin’izany koa ny fiarovana ny famatsiam-bary eo amin’ny roa tonta. Firenena mpamokatra ...Tohiny
Kaoperativa FMA: 163, 194, 192, 109,165,143,166 : Hampiakatra saran-dalana
HCC/Rajoelina : Mivandravandra ny tsikombakomba
Hery Rajaonarimampianina : Nanome fanampiana misavovona ny FLM tao Farihimena